चाडवाड लक्षित मासुको मूल्य निर्धारण, प्रति केजी के को कति ? - Arthatantra.com
चाडवाड लक्षित मासुको मूल्य निर्धारण, प्रति केजी के को कति ?
काठमाडौं । चाडबाडको लागि व्यवसायीहरुले खसी तथा बोकाको मासुको मूल्य निर्धारण गरेका छन् ।
व्यवसायीले निर्धारण गरेको मासूको मूल्यमा १३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । १३ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको मासुमा ह्याकुलासहितको मासु पाइने छ । यस्तै बोसो सहितको मूल्य १२ सय रुपैयाँ रहेको छ भने आन्द्राभुडीसहितको मासूको मूल्य एक हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै रागाँ तथा बङ्गुरको मासुको मूल्य ५–५ सय रुपैयाँ रहेको छ भने कुखुराको मासु प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
राष्ट्रिय मासु व्यवसायी सङ्घले उक्त मूल्य भने फुलपातीको दिनदेखि मात्रै लागू हुने गरी निर्धारण गरेको हो । यो मूल्य त्यो भन्दा अघि लागू हुने छैन । यो मूल्य उपत्यकामा मात्रै नभएर देशभर लागू हुने सङ्घका अध्यक्ष रमेश खड्गीले बताउनुभयो ।
चाडपर्वको समयमा मासु व्यवसायीले मनलाग्दी मूल्य लिन लागेको भन्दै व्यवसायीहरुले मूल्य नै निर्धारण गरेका हुन् । यो सँगै सबैले मासुको एकै मुल्य लिने छन् । उपभोक्ता भने नठगिने व्यवसायीको अपेक्षा रहेको छ । यो मूल्य लागू नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने संघले जानकारी गराएको छ ।
वि.सं.२०७८ असोज २१ बिहीवार १२:०५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे अधिकृतदेखि सहायकसम्मका पदमा खुल्यो जागिर, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
पछिल्लाे दशैं बिदामा पनि खुला रहने यी हुन् मेगा बैंकका शाखा कार्यालयहरु